Ephathekayo GPS-amatilosi Prestigio, Garmin: ukubuyekezwa, ukubuyekezwa
Izinkampani "Pretizhio" futhi "Garmin" emakethe anikele ezihlukahlukene amatilosi ephathekayo. Zingasetshenziswa kokubili abashayeli kanye nezivakashi. Nokho, umenzi lubahlukanise ngezigaba, futhi lokhu kufanele kucatshangelwe. Ngaphambi kokuba uthenge idivayisi kubalulekile ukujwayelana kwemigomo ukugunyazwa umkhiqizo. Ngaphezu kwalokho okudingeka ukwazi ukuvama CPU, okuyinto aboshelwe kudivayisi. Ngokuvamile, wathi ipharamitha kuyahlukahluka eduze 400 MHz.
Uma sicabangela kudivayisi komgwaqo, imodeli ephelele kumele inikezwe ubakaki obandayo. Ingabe namuhla eliphezulu ephathekayo GPS-amatilosi endaweni ayizinkulungwane 6. Hlikihla. Nokho, emakethe ungathola onobuhle eshibhile.
"I isithunzi 55 BT". Ephathekayo GPS-amatilosi: Ukubuyekeza, ukubuyekezwa
Wathi Itilosi elakhelwe abashayeli. Imisebenzi ehambisana ke impela eningi. Okokuqala kufanele kuphawulwe ukuthi uma isethi imizila lingalayishwa kuwo. Kulokhu, ukucutshungulwa idatha akuthathi isikhathi esiningi. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi itilosi akuyona kuphela icwecwe, kodwa futhi ukala kancane kakhulu. Ngakho, ke unamathele somoya ngaphandle kwezinkinga.
Kulokhu, lo ubakaki zokuthola kudivayisi likhona kit ejwayelekile. Imenyu ngokuphelele ngesiRashiya, futhi baqonde lilula kuwo. Ukudayela okusheshayo amakheli okunikezwe wumenzi. Uma ukholelwa ukuthi ukubuyekezwa abathengi, uhlelo sinquma imizila ngokushesha okukhulu. Kuwufanele ngosuku olushiwo Itilosi esifundeni ruble 5.600.
Izibuyekezo ze-Navigator "Prestige BT 60"
Izibuyekezo ecacisiwe ephathekayo GPS-amatilosi Prestigio, njengoba umthetho, zinhle. Okokuqala basuke ukunconywa ngokubekezelelana izindlu ezimangelengele. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi lokhu imodeli siqhutshwa induduzo enkulu. Imenyu kulokhu, kukhona incwadi elula kuyo ezinkulu. Ukukhanya imodeli ethulwa kungase kushintshwe. Uma ukholelwa ukuthi ukubuyekezwa abathengi, umzila ngosizo kule divayisi ehleliwe emva kwamaminithi ambalwa.
Njengoba umdlali umculo, lokhu itilosi, ngeshwa, asikwazi ukusetshenziswa. Kufanele kuphawulwe ukuthi umenzi ibhethri wayenike 400 mah kuphela. Ngaphandle lingatshajwa idivayisi akakwazi ukusebenza amahora angaphezu kwamabili. Ezimakethe lokhu model kungenzeka ukuthola ayizinkulungwane 5. Hlikihla.
Incazelo Kudivayisi "Prestige BT 70"
Izivakashi Itilosi esibekiwe kahle, futhi funa uphila kahle eliphezulu. Ngokuyinhloko-ke, kufanele kuqashelwe ukuthi le divayisi ine umdlali audio. Kulokhu, ifomethi eziyisisekelo umculo uhlelo ibona. Futhi, lolu imodeli isekela ezinye ifomethi. Isisindo saso singamakhilogremu ababebuthene ncamashi ecacisiwe Itilosi 190, izindlu it has a plastic, futhi kufanele umphathe kabi njengoba naye ngomusa, ngokuvumelana abathengi. Baphinde baqaphela ukuthi ungakwazi ngezifiso idivayisi ecacisiwe ulula. Nokho, zonke izilungiselelo kukhona reset uma ibhethri lingashajwa e imodeli. Idatha ephathekayo GPS-amatilosi manje ruble mayelana 6100.
Yini abantu bathini mayelana imodeli "Garmin 20"?
abathengi abaningi bakhetha lokhu Itilosi ukukhonjiswa ebanzi. Ukulungiswa kulokhu ezingeni of 320 x 420 pixels. Ngokusho ingxenye ukusebenza imodeli akuyona ezahlukene kwamanye amadivayisi. Kulokhu, umdlali yomsindo esetshenziswa ejwayelekile. Kulokhu, i-microphone ibekwe kuyinto ngempela qualitative.
Uma ukholelwa ukuthi ukubuyekezwa abathengi, umzila, uhlelo izinhlelo ngokushesha okukhulu. trajectory Ubude kule imodeli kungenzeka libalwe ayizinkulungwane 10. Amaphuzu. Uma sikhuluma imemori yangaphakathi, kungaba alobe kuze kube amathrekhi 100. Amabhethri lasetshenziswa kule ndaba Usayizi medium, kanye nokuntuleka umnikazi ngamahola amathathu kwedlule. Ezinomswakama wathi imodeli akesabi, kodwa okushisa aphansi nalezi Itilosi kufanele kugwenywe. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuqashelwe ukuthi angakwazi ukubekezelela ngisho ukulimala kancane. Processor kulesi simo inzwa ifakiwe. Imakethe wathi ephathekayo GPS-Itilosi Garmin zingathengwa for ruble 5.300.
izici Kudivayisi 'Garmin Etreks 72N "
Buyekeza Lokhu ephathekayo GPS-Itilosi Garmin has kokubili emihle nemibi. Uma sikhuluma izinzuzo, kubalulekile ngokuyinhloko ukubalula idivayisi multi-function. Geocaching, lokhu model ikuvumela ukuba ayisebenzise. Futhi ku imenyu zingatholakala ukuzingela ikhalenda. Kulesi umdlali nomkhiqizi umsindo unikezwe interface ezithakazelisayo abaningi azokuthanda. Ifomethi MP3 Navigator udlala.
Futhi uyakwazi ukufunda nezakhiwo eziningi amafayela evidiyo. Ezezindlu kulokhu, kukhona eqinile, kodwa wesaba nomswakama eliphezulu. Sebenzisa imodeli ecacisiwe kungenzeka ezingeni lokushisa hhayi ngaphansana degrees -10. Kulesi ukushisa, lokhu ukuguqulwa kungaqali esabe. Ingabe namuhla imelelwa ephathekayo GPS-amatilosi esifundeni ruble 4,500.
Umthengi izibuyekezo mayelana 'Garmin Etreks 10 "
Lokhu ephathekayo GPS-Itilosi lobuya umthengi uvamise e processor kuqhathaniswa enamandla. Kuyinto ukwazi ukusebenza nge imvamisa nokukhawulela at 400 MHz. Kufanele kukhunjulwe ukuthi umdlali kule imodeli lapho. Lapho le menu oluphakeme olunzulu futhi izilungiselelo enemininingwane zingenziwa. Kulokhu, ukucutshungulwa idatha akuthathi isikhathi esiningi. MPEG4 ngefomethi eshiwo kudivayisi izisekelo.
Ngaphezu kwalokho, sicela uqaphele ukuthi itilosi ukala amagremu 120 kuphela Kungcono kakhulu abavakashi. Nokho, imoto yakhe futhi ingafakwa. Imodeli yebhethri lishumekwe wathi uhlobo polymeric. umthamo wayo isezingeni 600 mah. USB-isixhumi kule imodeli kukhona, kwikhompyutha siqu kungenzeka ukuxhuma. Ingabe lezi ephathekayo GPS-amatilosi mayelana ruble 4800.
Izici ukuguqulwa "Garmin 30T"
Izibuyekezo wathi itilosi uthola ngokuvamile ezinhle, kodwa nebubi ke sisekhona. Okokuqala zihlotshaniswa processor ababuthakathaka. Kulokhu, kungaba ukumelana imvamisa embundwini 300 MHz. Ngakho, imizila eside kubalwa isikhathi eside ohlelweni. Nokho, akuzona njalo ilungile. Uma sikhuluma izinzuzo ke itilosi umthamo high ibhethri ifakiwe. Ngaphandle lingatshajwa idivayisi uyakwazi ukusebenza cishe amahora amathathu.
Indlela ulayishe ihambelana iyunithi yakho ngendlela efanele
Prology Ione 1000: izibuyekezo DVR
"Garmin" uyisihambi sezokuvakasha. Incazelo, imiyalelo, ukubuyekezwa
GPS-Itilosi Lexand SA5: incazelo kanye nokubuyekeza
Amatilosi - abashayeli Izibuyekezo
Ngubani kunamandla - ibhere noma ibhubesi? Amandla bear ngokumelene ingonyama prytkosti
Inkukhu Homemade noodle iresiphi
A. P. chehov, "The Lady ne-Dog": An Analysis. "I-Lady ne-Dog" - indaba ngothando
"Eugene Onegin": isifinyezo noveli evesini
Smartphone Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos: Uhlolojikelele, izici
Toyota starlet - ukonga "Ikhanya" kanye nesigcawu ezemidlalo Tuning
Conservation Secrets: amakhowe zifakwe emanzini anosawoti emabhange
Kuyini siphetfo? Inchazelo
Izincwadi Chivalric KweNkathi Ephakathi: Uhlu kanye nokubuyekeza
Coffee "Nescafé Espresso". Izibuyekezo ikhasimende
I-Novosibirsk: uhlu olumnyama lwabaqashi. Impendulo ezinkampanini-abaqashi